Shabaab oo Qaraxyadii Manta War Dheer Ka Soo Saaray | All Somalia
← Magaalada Baladweyne oo Ka Sii Socdaan Howlgallo Balaaran
Daawo Sawiro: Booqashadii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Degmada Deyniile →
Shabaab oo Qaraxyadii Manta War Dheer Ka Soo Saaray
Posted on May 5, 2013	Dhaq dhaqaaqa shabaab ayaa war dheer ka soo saaray qaraxyadii manta ruxay qeybo kamida magaalada Muqdisho.
Al-Shabab oo sheegtay mas’uuliyada qaraxii maanta iyo dawlada ooo beenisay in wasiirka arrimaha gudaha lala eegtay.
Sida lagu qoray bogga Somalimemo oo ka mid ah warbaahinta Shabab sarkaal lagu sheegay inuu ka tirsan yahay Xafiiska warfaafinta Xarakadda Al-Shabab ayaa sheegay inay iyagu ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay maanta isgoyska Nambar 4 ee magaalada Muqdisho ee khasaraaha badan dhaliyay.
Sarkaalkaan oo an magaciisa la sheegin ayaa sheegay in gaari miinaysan ay ku weerareen kolonyo siday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka C/kariin Xuseen Guuleed iyo dad cadaan ah oo marayay goobta qaraxu ka dhacay.
Sarkaalkaasi Shababka ah ayaa yiri “”Mujaahidiinta ayaa maanta beegsaday wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdi caddaan calooshood u shaqeystayaal ah,weerarka waxaan u adeegsanay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo aan u dhignay wadada hareeraheeda” waxaana uu intaa ku daray in gaariga qarxay ay goobta horey u sii dhigeen sidii la rabayna ay wax udhaceen sida uu yiri.
Sarkaalkaan Shabab u hadlay waxaa uu sidoo kale dusha uriday qarax kale oo uu sheegay inuu saaka ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.
Sidoo kale Sh, C/casiis Abu Muscab oo ka mid ah afhayeenada ay Al-Shabab leeyihiin oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in qaraxii manta uu bilaw u yahay weeraro kale oo ay magaalada la maagan yihiin.
Dhanka kale nin la sheegay inuu afhayeen u yahay R/wasaaraha Soomaaliya oo la yiraahdo Axmed Aadan oola hadlay Tv,ga CNN,ka eek u yaala dalka Maraykanka in qaraxa lala eegtay wafdi u dhashay dalka Qatar oo la socday kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM.
Axmed Aadan waxaa uu xusay in qaraxa oo is miidaamin ah aysan jirin wax khasaaro ah oo kaasoo gaaray waftiga Qatar oo uu sheegay inay dhamaan bad qabaan.
Afhayeenkaan u hadlay xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya waxaa uu beeniyay in gaadiidka la qarxiyay uu ku jiray Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya waxaana uu xaqiijiyay in xilliga qaraxu dhacayay uu wasiirku ku sugnaa xafiiskiisa.
War kooban oo sidoo kale kasoo baxay taliska AMISOM ee Muqdisho oo uu baahayay TV,ga CNN ayaa waxaa lagu sheegayaysan jirin wax khasaaro ah oo ciidamadooda kaasoo gaaray qaraxii maanta.
Ka sokow hadalada kasoo baxay dhinacyadaan kala duwan qaraxyadii maanta waxaa xusid mudan in khasaaraha ugu badan uu dad rayid ah kasoo gaaray.
Fadlan haddaad talo iyo tusaale aad nagu siyaadineyso ama aad su-aal qabto, nagala soo xiriir webmaster@allsomalia.com	This entry was posted in Wararka Maanta, wararka maanta, Warka Soomaali [news]. Bookmark the permalink.	← Magaalada Baladweyne oo Ka Sii Socdaan Howlgallo Balaaran